प्रधानमन्त्री ओलीले जम्मा ८ जनालाई मात्र दिय नियुक्ति , – Ranga Darpan
प्रधानमन्त्री ओलीले जम्मा ८ जनालाई मात्र दिय नियुक्ति ,
१४ चैत, काठमाडौं – चार दर्जनभन्दा बढी सदस्य रहने गरेको सचिवालयको आकार घटाएर २८ मा झारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसम्म ८ जनालाई मात्र नियुक्ति दिएका छन् । यसपटक व्यक्तिको सत्य तथ्य आचरण र पृष्ठभूमि बिचार गरेरमात्र सचिवालयमा सहयोगी नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बतायका छन् ।
प्रमुख स्वकीय सचिवमा अहिलेसम्म कसैले नियुक्ति पाएका छैनन् । स्वकीय सचिवमा भने राजेश बज्राचार्य नियुक्त भइसकेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले हालसम्म मन्त्रीस्तरको सुबिधा पाउने गरी एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य बिष्णु रिमाललाई मुख्य सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । रिमालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै सोमवारमात्र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राज्यमन्त्री सरहको सुबिधा पाउने गरी अच्युत मैनालीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मैनाली बारा १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका हुन् । उनी नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति हुन् ।त्यस्तै प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुन्दन अर्याल नियुक्त भएका छन् । अर्याल बुधवार साप्ताहिकका पूर्वसम्पादक समेत हुन् भने नेपाल टेलिभिनजका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष पनि ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा पत्रकार चेतन अधिकारी नियुक्त भएका छन् । उनी यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस संयोजक थिए भने ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि उनी नै सचिवालयमा प्रेस संयोजनको भूमिकामा थिए । अर्का पत्रकार रामशरण बजगाईंलाई सूचना सम्प्रेषकको नियु्क्ति दिइएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम तथा भेटघाटहरुको फोटो खिच्ने जिम्मासहित कृष्ण पौडेल नियुक्त भएका छन् । दिपेन्द्र दाहाल स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त भएका छन् ।साभार अन्लाईनखबर बाट ,,
७ न. प्रदेश ४३ अर्ब घाटामा सरकार चलाउन गारो मन्त्रि झपटबहादुर बोहोराको भनाई,,
,कृ, का निर्माताले सम्भु प्रधानलाई ११ लाख दिने ,,